अन्तरास्ट्रिय Archives - Page2of3- News21Nepal
जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति मा बहुमत सहित बिजयी , पूरा हेर्नुस ।
November 7, 2020 news21nepalLeaveaComment on जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति मा बहुमत सहित बिजयी , पूरा हेर्नुस ।
November 7, 2020 November 7, 2020 news21nepalLeaveaComment on बाइडेन चार राज्यमा अगाडि, जितको घोषणा नगर्न ट्रम्पको चेतावनी, अब के होला? पूरा हेर्नुस ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनबाट पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । देशका कुल ५० राज्य मध्ये मत गणना सम्पन्न भएका ४४ राज्यमा बाइडेन विजयी भएका छन् भने अहिले मतगणना भइरहेका चार राज्यमा पनि उनको फराकिलो अग्रता रहेको छ । […]
जापानमा ६.२ म्याग्नीच्युडको भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाकी,
November 7, 2020 news21nepalLeaveaComment on जापानमा ६.२ म्याग्नीच्युडको भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाकी,
जापानमा शनिबार ६.२ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको छ । राजधानी टोकियोदेखि झण्डै ६०० माइल दक्षिपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने चिचिजिमालाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो । […]
November 5, 2020 news21nepalLeaveaComment on अमेरिकी रास्ट्रपति ,निर्वाचन : बाइडन ‘जित नजिक’, अदालती प्रक्रियामा गए ट्रम्प,यस्तो छ अहिले सम्मको अन्तिम परिणाम ।
२० कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन ‘जित नजिक’ पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अहिलेसम्म बाइडनले २५३ इलेक्टोरल कलेज भोट पाएका छन् । उनले यसअघि ट्रम्पले जितेको मिशिगन र विस्कोन्सिनमा महत्वपूर्ण जित हात पार्दै आफ्नो अग्रता कायम राखेका हुन् । यी दुई राज्यमा सन् […]
कमिन्सको बलिङसामु राजस्थान निरीह, कोलकाता ६० रनले विजयी । पूरा हेर्नुस ।
November 2, 2020 news21nepalLeaveaComment on कमिन्सको बलिङसामु राजस्थान निरीह, कोलकाता ६० रनले विजयी । पूरा हेर्नुस ।
१७ कात्तिक, काठमाडौं । आईपीएल क्रिकेटमा कप्तान इयान मोर्गानको उत्कृष्ट ब्याटिङ र पेट कमिन्सको कसिलो बलिङको मद्दतमा कोलकाता नाइट राइडर्सले राजस्थान रोयल्सलाई ६० रनले हराएको छ । कोलकाताले दिएको १९२ रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा १३१ रन मात्र बनाउन सक्यो। कोलकाताका लागि पेट कमिन्सले चार विकेट लिए । शिवम माझी […]
कोराना भाइरस बारे नया तथ्य सार्बजनिक , बस ड्राइभरकी छोरीले पत्ता लगाएकी थिइन् कोरोना भाइरस? आखिर को हुन त उनी ? पूरा हेर्नुस ।
November 1, 2020 news21nepalLeaveaComment on कोराना भाइरस बारे नया तथ्य सार्बजनिक , बस ड्राइभरकी छोरीले पत्ता लगाएकी थिइन् कोरोना भाइरस? आखिर को हुन त उनी ? पूरा हेर्नुस ।
मानिसमा पहिलो पटक कोरोनाभाइरस खोज गर्ने महिला स्कटल्याण्डका एक बस ड्राइभरकी छोरी थिइन्, जसले १६ वर्षमै स्कूूूल छोडेकी थिइन् । उनको नाम थियो जूून अलमोडा, जो भाइरस इमेजिङ क्षेत्रका चर्चित नामहरुको सूूचिमा आफ्नो नाम लेख्न चाहन्छिन् । तर, कोभिड १९ महामारीका समयमा जूूनको कामको चर्चा सर्वत्र भइरहेको छ र उनको खोजको चर्चा केन्द्रमा छ। कोभिड […]
November 1, 2020 news21nepalLeaveaComment on मुम्बई इन्डियन्स आईपीएलको क्वालिफायरमा, को सग कहिले खेल्दै छ ? पूरा हेर्नुस ।
१६ कात्तिक, काठमाडौं । मुम्बई इन्डियन्स जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को क्वालिफायरमा पुगेको छ । शनिबार दिल्ली क्यापिटललाई पराजित गरेर मुम्बईले क्वालिफायर यात्रा निश्चित गरेको हो । १३ म्याचबाट १८ अंक जोडेको मुम्बईसँग क्यालिफायर–१ मा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानका रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलौर र दिल्लीबीचको विजेताले खेल्नेछ । १३–१३ म्याचबाट समान १४–१४ अंक जोडेका बैंगलौर […]
October 28, 2020 news21nepalLeaveaComment on भर्ने हैन त आइपिओ(ipo)?अहिले सम्मकै बिश्वकै ठुलो आइपिओ आउदै? पूरा हेर्नुस ।
चिनियाँ अर्बपति व्यापारी तथा ई–कमर्श प्लेटफर्म अलीबाबाका संस्थापक ज्याक माको कम्पनीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो आईपीओका साथ बजार प्रवेश गर्ने तयारी गरेको छ। ज्याक माको फाइनान्सियल टेक्नोलोजी कम्पनी आन्टले ३४ अर्ब ४० करोड डलरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी शुरु गरेको हो। शांघाई र हङकङको शेयर मार्केटबाट आन्टले ३४ अर्ब ४० करोड डलर बराबरको रकम उठाउने लक्ष्य […]
October 27, 2020 October 28, 2020 news21nepalLeaveaComment on फेसबुकले ल्यायो आकर्षक फिचर, भिडियो खोज्न अब हुनेछ सहज। पूरा हेर्नुस ।
काठमाडाैं । फेसबुकमा दैनिक कयौं भिडियो डाउनलोड हुने गर्दछन् । तपाईं पनि आफ्नो टाइमलाइनमा कयौं भिडियो हेर्नुहुन्छ होला । कयौं समय तपाईं कुनै भिडियो दोहोर्‍याएर हेर्न चाहनुहुन्छ । तर सर्च गर्न निकै झन्झट भइदिन्छ । अब फेसबुकले आफ्नो भिडियो प्लेटफर्ममा नयाँ आकर्षक फिचर ल्याएको छ । जसमा प्रति महिना एक अर्ब २५ करोड प्रयोगकर्ता आउने […]
October 27, 2020 news21nepalLeaveaComment on मदरसामा बम बिस्फोट, ८ जनाको मृत्यु
११ कात्तिक, काठमाडौं । पाकिस्तानको एक मदरसामा बम बिस्फोट हुँदा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११० जना घाइते भएका छन् । खैबर पख्तुनख्वाह प्रान्तको पेशावर सहरस्थित जमिया जुबेरिया मदरसामा त्यसबेला बिस्फोट भएको हो, जतिबेला विद्यार्थीहरु कुरान पढिरहेका थिए । बिस्फोटमा मृत्यु भएकामध्ये चार जना विद्यार्थी छन् । उनीहरुको उमेर २० देखि २५ वर्षसम्म […]